फिल्मी सैलिमा भयो लोकदोहोरी गीतको ट्रेलर सार्वजनिक, हेर्नुहोस् सय वर्ष पुरानो माया-प्रेमको गीत
बैशाख १२, सल्यान ।
नेपालकी सबैभन्दा महङगी गायीका बिष्णु माझी र गायक नेत्र भण्डारीको आवाजमा रहेको एउटा गीतको गीतको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नेपाली चलचित्रमा जस्तै यो गीतको पनि ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो । यसरी गीत सार्वजनिक हुनु भन्दा केही दिन अघि गीतको ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने पछिल्लो समय केही लोकदोहोरी गीतमा भएको छ ।
आज मात्रै मालती डिजिटल प्रा.ली.ले बजार ब्यवस्थापन गरेको लोकदोहोरी गीत “नियती” को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ ।
गीतको लय संगीतकार रामु खड्काले गरेका छन् । कपिल लामाले निर्देशन गरेको गीतको म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समयका ब्यस्त अनि चर्चित मोडल महेन्द्र गौतम र रञ्जिता गुरुङको अभिनय रहेको छ ।
गीतमा पौराणिक कथामा आधारित आजभन्दा १ सय वर्ष पुरानो माया प्रेम देखाउन खोजिएको गायक नेत्र भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । “नियती” गीत को पूरा भिडियो बैशाख २८ गते आइपुग्ने बताइएको छ ।
सम्बन्धीत अन्य यी समाचार पनि पढ्नुहोस्
गायक नेत्र भण्डारी देखिए मोडलमा, सार्वजनिक भयो लोकदोहोरी गीत ‘कहाली’ (भिडियो सहित)
विगत लामो समयदेखि लोकदोहोरीको क्षेत्रमा रहेका चर्चित गायक नेत्र भण्डारीले अभिनय गरेको एउटा लोकदोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ । नेत्र भण्डारी र साया भण्डारीद्वारा अभिनीत “कहाली” बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो ।
मालती डिजिटलको प्रस्तुतीमा हरिकला बिसीको “कहाली” गीतमा करिश्मा बिसी र मोहन बिसीले आवाज दिएका छन् । गीतको लय नेत्र भण्डारी र शब्द सन्ध्या केसीले गरेकी छन् ।
कपिल लामाको निर्देशन र अमर शाक्यको सम्पादनमा निर्माण गरिएको म्युजिक भिडियोको छायाँङकन राजेश घिमीरेले गरेका छन् ।
अमृता लुङ्गेलीको नेत्र भण्डारी सँग डार्लिङ आइ लभ यु (भिडियो सहित)
चर्चित गायक नेत्र भण्डारी र गायीका अमृता लुङ्गेली मगरको आवाजमा माया प्रेम सँग संबंधित नाच्न मिल्ने खालको गीत सार्वजनीक भएको छ ।
गायीका अमृता लुङ्गेली मगरको (डार्लिङ आइ लभ यु) बोलको गीतलाई नेत्र र अमृताले आवाज दिएका हुन । सुन्दा नाच्न मन लाग्ने उक्त (डार्लिङ) गीतको शब्द टुरिष््ट जंग विक र लय गायक नेत्र भण्डारीले नै गरेका छन् ।
आशिष म्युजिक प्रा.ली. बाट बजारमा आएको उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा सुशान्त र सन्जनाको अभिनय रहेको छ । बब्बु थापाको निर्देशन र नविन घर्ति मगरको सम्पादन रहेको गीतको छायाँङकन दुर्गा पौडेलले गरेका छन् ।
(डार्लिङ आइ लभ यु) गीतको म्युजिक भिडियोको दृश्य निर्माण एकता फिल्मस प्रा.ली. ले गरेको हो ।
नेत्र र तिर्सनाको मुखैबाट अायाे “ठुम्का” (भिडियाे सहित)
चर्चित लाेकदाेहाेरी गायक नेत्र भण्डारी र तिर्सना घर्ती मगरको अावाजमा रहेकाे लाेक पप गीत “ठुम्का” सार्वजनीक भएकाे छ । तिर्सना घर्ती मगरको उक्त “ठुम्का” बाेलकाे लोक पप गीत हिजाे म्युजिक नेपालकाे युट्युब च्यानल बाट सार्बजनिक भएकाे हाे ।
निकै रमाइलो तरिकाले निकालिएको “ठुम्का” गीत अलि पृथक किसिमको मनोरञ्जनमा प्रस्तुत गरिएकाे छ । रमाइलो र ठट्यौली शब्दहरु समेटिएको “थुम्का” गीतकाे शब्द सन्ध्या के.सी.ले लेखेकी छन् भने संगीत नेत्रकाे नै रहेकाे छ ।
दिपक र लोसिनाको अभिनय रहेको “ठुम्का” गीतकाे म्युजिक भिडियाेकाे निर्देशन क्रान्ति के.सी.ले गरेका छन् भने अजय रेग्मीले छायांकन गरेका छन् ।
यस गीतकाे म्युजिक भिडियोको दृश्य निर्माण तथा व्यवश्थापन मालती डिजिटल प्रा.लि. ले गरेको छ ।
माया नपाएर मृत्यु भएका बिमल र सारीकालाई नेत्र र रुक्मणीकाे “हार्दिक श्रद्धाञ्जली”
धेरैको प्रतिक्षामा रहेको गायक नेत्र भण्डारी र गायीका रुक्मणी रिजालको स्वरले भरीको मार्मिक लोक गीत “हार्दिक श्रद्धाञ्जली” आज सार्वजनीक भएको छ
माया प्रेम सँग सम्बन्धीत रुक्मणी रिजालको उक्त गीत म्युजिक नेपालको युटुब च्यानल मार्फत बजारमा आएको हो । लोकदोहोरी गीत “हार्दिक श्रद्धाञ्जली” सार्वजनीक हुनुभन्दा अगाडीनै चर्चामा रहेको र धेरैले प्रतीक्षा गरेको गीत हो ।
गीतको कथा अनुसार गीतमा अभिनय गर्ने मोडलहरुले एक अर्काको फोटोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्नुपर्ने भएको र उनीहरुले लेखेकै कारण यो गीतले प्रकाशन अगाबै चर्चा र आलोचना बटुलेको थियो ।
म्युजिक भिडियोमा देखाएको कथा अनुसार मोडल बिमल अधिकारी र सारिका केसीको यात्राको क्रममा भेट भएपछि मायामा केहि खटपट देखिएको हुन्छ ।
त्यसपछि बिमल रिसको झोकमा सडकमा हिडिरको अबस्थामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिदाँ उनको मृत्यु हुन्छ । त्यसैगरी रिसले चुर भएर जंगलमा हिडिरहेकी सारिका पनि ढुङगामा ठेस लागेर रुखमा ठोकिदाँ उनको पनि मृत्यु हुन्छ ।
मृत्युसँगै उनिहरुले एकअर्कालाई भन्छन्, “गए म आगो सँगै बली, टाढा हौली मलामी जान तिमी नपाउली, फोटो हाली फेसबुकमा लेख्दीए हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।’’
गीतको म्युजिक भिडियोमा बिमल अधिकारी र सारिका केसीको अभिनय रहेक देखिन्छ । सन्ध्या केसीले सिर्जना गरेको उक्त गीतको लय गायक रामु खड्का ले गरेका छन् । कपिल लामा को निर्देशन, अ्अर शाक्य को सम्पादन रहेको गीतको छायाँकन सुरेस श्रेष्ठले गरेका छन् ।